EVY's Kitchen: ချက်စားဖြစ်တဲ့ ဗမာစာလေးများ
ဒါလေးတွေကတော့ ချက်စားဖြစ်တဲ့ ဗမာဟင်းလေးတွေပါ။ တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း ဟင်းအဆန်းတွေချက်ဖြစ်သလို တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း ရိုးရိုးလေးတွေပေါ့နော်။ ကျွန်မမြန်မာဟင်းခွက်တွေ ဆက်တိုက်ချက်ပြီဆိုရင် အိမ်သားတွေလည်း သိပါပြီ။ ဒါဒီလအတွက် လုပ်စရာရှိသော ဟင်းခွက်များပြီးသွားလို့ သူအေးအေးဆေးဆေးဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါပဲ :D
ခုနောက်ပိုင်းတော့ ဗမာဟင်းလေးတွေလဲ ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး fan page မှာတင်ဖြစ်တာ များပါတယ်။ ရိုးရိုးဆန်းဆန်း ၂ မျိုးလုံးကို ပုံလေးတွေလည်း ကြည့်ရအောင်လို့ပါ။ ခုလည်းဘလော့က သူငယ်ချင်းများ အတွက် မြန်မာဟင်းခွက်လေးတွေကိုလည်း မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
ဒီဟင်းလေးတွေက ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ရှိသမျှပစ္စည်းတွေကို စုပုံရှင်းထားတဲ့ဟင်းလေးတွေပေါ့။ နေ့လည်စာ ခရုဆီပြန်၊ ပဲသီးကြက်ဥကြော်၊ ခရမ်းသီးမီးဖုတ်သုပ် နဲ့ ဘူးသီးမုန်လာချဉ်ရေ။
ခရုဆီပြန်၊ ခရုလေးတွေကို ရေးဆေးပြီးစစ်ထား၊ ကြက်သွန်ဖြူ ၅ မွှာနဲ့ ငရုပ်သီးအနီ ၃ တောင့်ကို ရောထောင်း၊ ကြက်သွန်နီ ၁ ဥကို ပါးပါးလှီးပြီးထည့်ထောင်း။ အဲဒါတွေကို ဆီမျာများနဲ့သတ်။ ကြက်သွန်နွမ်းရင် အရောင်တင် နဲနဲ နဲ့ ခရမ်းချဉ်သီး ၁ လုံး (သေးသေးလှီး) ထည့် ပြီး ခရမ်းချဉ်သီးညက်စပြုရင် ခရုလေးတွေထည့်၊ ငရုပ်သီးထည့် ဆားအချို့မှုန့်ထည့်ပြီး ရေလေးနဲနဲလေးထည့်ပြီး ဆီပြန်ရင်ရပါပြီ
ခရမ်းသီးကို ၂၂၀ ဒီဂရီအာဗင်မှာ နာရီဝက်မီးဖုတ်ပြီး ရလာတဲ့အသားကို ဆီ၊ကြက်သွန်စိမ်း၊ ဆားနဲ့ရောနယ်သုပ်ထားတာပါ။ ဆိမ့်ဆိမ့်လေးနဲ့ စားလို့ကောင်းပါတယ်။
Posted by Evy at 11:04 PM
Yummy! My mouth is watering just looking at this picture!
Eve ရေ ဘလော့ဂ်ကို မရောက်တာကြာသွားလို. အခု လာလည်ပြီး ငတ်ကြီးကျသွားပါတယ် လို.